YAKATAURWA NAANASTASIA STEFANUK JUNE 3, 2019 YAKAKONZESESWA ZVAKAITIKA, ZVINANGWA ZVAKANAKA
Mabhizinesi kumativi ese epasi pari zvino ari kubatanidza tekinoroji yekukwidziridza zvigadzirwa nemasevhisi uye kuenderana nenguva. Iyo inotarisirwa hunyanzvi hwe tech tech ye2020 iri kusendamira mukubatanidza sarudzo dzakawedzera dzakadai seAugmented Reality (AR) uye Virtual Reality (VR) mune maindasitiri akawanda, kunyanya muRetail. Kuve neruzivo rwakawanda pamusoro pekuti ungadzidza sei bhizinesi kunyorera uye izvo chaizvo makambani anovaita zvinobatsira.
Sei Toshandisa VR muBhizinesi?
Kune huwandu hwekubatsira kwebhizinesi kana uchishandisa VR tech. Muna 2018, iyo AR / VR musika waikosheswa nemari inosvika mabhiriyoni gumi nemaviri, uye zvinofungidzirwa kukwira kusvika pamadhora anopfuura mabhiriyoni mazana maviri nemakumi mairi nemakumi maviri nemazana maviri.
1. Kuwedzerwa Kwevatengi Chiitiko
VR uye AR inobvumira kuwedzera yakadzika uye yakananga kunotenga ruzivo. Manzwiro evatengi ari kuita uye kukwanisa kuzvimisira ivo pachavo uye kutarisa pane chaiyo yezviitiko pasina zvinotsausa zvekunze. Izvi zvinobvumidza vatengi kuti vazive chigadzirwa mune chaiyo nharaunda.
2. Yakadzika uye Inopindirana Masystem Strategies
Tekinoroji yeVR inobvumidza mabhizinesi kuve nehunyanzvi hwekushandurwa mukushandisa iyo 'edza usati watenga' pfungwa. NeVR, kushambadzira kwechigadzirwa kunotenderera nekugadzira yakadzika-ruoko rwekutanga ruoko rwechigadzirwa. VR inokwanisa kuendesa vanhu kuenda chero kupi, chaiko kana kufungidzira. Iyi tekinoroji inoshandura kushambadzira kubva kuudza nyaya yechigadzirwa kuratidza uye kurega vatengi nevashambadziri kuti vazive icho chigadzirwa ivo pachavo.
3. Yepamberi Bhizinesi uye Yevatengi Analytics
VR inobvumira vatengi kuti vaongorore kutengesa, kuita uye kunaka kwechigadzirwa. Mabhizinesi anokwanisa kuunganidza ruzivo rwakawanda rwekuti zvigadzirwa zvinogamuchirwa sei nevatengi. Vatengesi vanoongorora zvakanyanya data rakasimba iro rinogona kushandiswa kugadzirisa mhando yechigadzirwa uye nekuwedzera kutendeka kwevatengi.
Virtual chaiyo inopa akawanda mikana yekushandisa kune akasiyana maindasitiri. Vashambadziri vanokwanisa kuvaka kutarisira uye kufarira nekupa vangangoita vatengi uye vatengesi mukana wekuona zvigadzirwa kana masevhisi anopihwa, akadai sekufamba nekugadzirisa nzvimbo. Iko kushandiswa kweVR sechikamu chezvigadzirwa uye masevhisi anopihwa nekambani zvinosimudzira zvese zviri zviviri kambani zvigadzirwa uye ruzivo urwo vatengi vane izvo zvigadzirwa zvavo.
Marriot Hotera inoshandisa VR kurega vatenzi vavo vachiona matafura avo akasiyana siyana pasi rese. Nepo mhuka dzesango Kuvimba kweSouth uye West Wales inopa VR yakaiswa kushandiswa uye 3D mavhidhiyo kunyudza vashanyi vavo mune ruzivo rwekushanyira nzvimbo yavo uye kunakidzwa nemusango. VR mukushanya yakaratidzira zvakare kuve inobatsira kumakambani akabatanidzwa. Kubatana pakati paThomas Cooke uye Samsung Gear VR kwaive ne40 muzana ROI mukati memwedzi mitatu yekutanga kutangwa kwayo.
Makambani ekuvandudza dzimba akaita seIKEA, John Lewis, uye Lowe's Home Improvement vakashandisawo VR. Iyo tekinoroji inogonesa vatengi vavo kuona nemusoro yavo yavanoda kurongedza dzimba gadziriso mu 3D. Izvi hazvisi chete izvo zvinosimbisa iwo maonero edzimba dzadzo, asi ivo zvakare vanokwanisa kuvandudza pazvirongwa zvavo nekutamba vachitenderera nenzvimbo yavo yakanaka vachishandisa zvigadzirwa zvinopihwa nekambani.
TOMS zvitoro zvinotengesa zvinoshandisa VR zvinobvumidza vatengi kufamba pamwe neshangu dzavo uye vanotevedzera mafambiro anoita kubva pakutenga kwavo kuenda kune zvipo kuCentral America. Makambani emotokari akaita seVolvo anopa vatengi vavo mukana wekuyedza drive imwe yemamodeli avo matsva kuburikidza neVR yavo app. McDonald's vakashandisa yavo Happy Meal Box uye vakachishandura kuita VR seta Happy Goggles iyo vatengi vanogona kushandisa kutamba mitambo uye kubatana nayo.
Makambani ezvekutengesa zvivakwa, akadai seGiraff360 neMatterport, anopa vatengesi zviwanikwa. Nzvimbo dzepadenga dzakasimudzirwazve neVR, uye yakawedzera mumiririri uye kubatirana nevatengi uye kufarira. Zvirongwa zvekushambadzira uye zvigadziriso zvava chiitiko chakawandisa uye chakanyura chevatengi nevamiririri vane VR zano netekinoroji.
Kuwedzeredzwa Reality ndiyo Ramangwana
Nekuenderera mberi kwekusimudzira kweVR tekinoroji nekusimudzira, zvinofungidzirwa kuti chikamu chimwe muzvitatu chevatengi vepasi rese vachange vachishandisa VR panosvika 2020. Uye nevanhu vazhinji vachiwana uye vachishandisa tekinoroji yakadai, mabhizinesi achazotevera nekupa VR-inoenderana zvigadzirwa. uye masevhisi. Kukumikidza tekinoroji yakadai kuti isvike kumabhizinesi kunowedzera zvigadzirwa, masevhisi, mazano ekushambadzira, uye kutendeka kwevatengi.